मन्त्रीको दौडमा को अघि को पछि ? कसलाई कुन-कुन मन्त्रालय ? – Makalukhabar.com
मन्त्रीको दौडमा को अघि को पछि ? कसलाई कुन-कुन मन्त्रालय ?
काठमाडौं, साउन ११ । सत्तारुढ कांग्रेसभित्रै भागबन्डा नमिल्दा मंगलबार तय भइसकेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको छ ।, यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा छ । प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेलबीच मन्त्रालय बाँडफाँडका विषयमा सहमति हुन नसकेपछि मंंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नयाँ मन्त्रीहरूको शपथका लागि राष्ट्रपति कार्यालयसँग मंगलबार बेलुका ५ बजेको समय लिएको थियो । तर, कांग्रेसका मन्त्रीको नाम निश्चित हुन नसक्दा शपथग्रहण हुन सकेन ।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवाले पौडेल पक्षले सरकारमा सहभागी हुने चार मन्त्रीको नाम नदिएपछि मंगलबार सरकार विस्तार हुन नसकेको जानकारी दिए ।
‘उहाँहरूले चार मन्त्रीको नाम टुंग्याएर पठाउन नसक्दा सरकार विस्तार रोकिएको हो,’ देउवाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘उहाँहरूले नाम पठाएपछि पाउने मन्त्रालयको टुंगो लाग्छ ।’ देउवाले बुधबार १ बजे मन्त्रीहरूको शपथ हुन सक्ने जानकारी दिए ।
शपथग्रहणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राष्ट्रपतिसँग मंगलबार अपराह्न पाँच बजेको समय लिएको थियो । तर, शपथग्रहण कार्यक्रमका लागि प्रधानमन्त्री र नयाँ मन्त्रीहरू जानुको सट्टा कार्यक्रम स्थगित गरिएको जानकारी पठाइयो । ‘मंगलबार बेलुका ५ बजेलाई लिइएको थियो । तर, दिउँसो मन्त्रीको शपथ नहुने जानकारी आयो,’ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सञ्चार मामिलाविज्ञ माधव शर्माले मंगलबार साँझ नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अब कहिले गर्ने भनेर समय लिइएको छैन ।’